Madaxweyne Gaas oo Gaalkacyo lagu soo Dhaweeyay – Radio Daljir
Madaxweyne Gaas oo Gaalkacyo lagu soo Dhaweeyay
Oktoobar 27, 2015 9:05 b 0
Talaado, Oktoobar 27, 2015 (Daljir) —Madaxweynaha iyo wefdiga uu hogaaminayey oo saaka ka soo ambabaxay magaalada Garoowe ee caasimadda Dawladda Puntland ayaa ugu horeyn si habsami leh loogu soo dhaweeyey Degmada Burtinle ee Gobalka Nugaal.
Waxaana soo dhaweynta Madaxweynaha ka qeyb-qaatay maamulka Gobalka Nugaal, maamulka degmada Burtinle, waxgarad, cuqaal, dhalinyaro, haween iyo bulshada qeybaheeda kala duwan oo safnaa wadada hareeraheeda.
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo xarunta maamulka degmada Burtinle kula hadlay bulshada degmadaasi ayaa waxaa uu uga mahadceliyey soo dhaweynta qiimaha leh ee ay u sameeyen, waxaana uu bogaadiyey maamulka cusub .
Intaas kadib ayaa Madaxweynaha iyo wefdiga uu hogaaminayo u soo ambabaxeen magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobalka Mudug Puntland , waxaana banaanka hore ee laga soo galo magaalada ku soo dhaweeyey Maamulka Gobalka, maamulka Degmada , waxgarad , ardey , haween, dhalinyaro iyo masuuliyiin kale oo diyaar u ahaa soo dhaweynta madaxweynaha .
‘’ aad iyo aad baan uga mahadnaqaya soo dhaweynta balaaran ee aad noo sameyseen , waxaan u soo laabtay inaan dhamaystirno howlihii aanu ka haynay Gobalka Mudug , dabadeedna aan ku laabto caasimadda Puntland ee Garoowe , si aan howshayadii aan qaranka u haynay u sii wadno ‘’ Ayuu yiri Madaxweyne Gaas.
Madaxweynaha ayaa sheegay inuu rajeynayo in howsha qaran ee uu ka hayo Gobalka Mudug uu ku soo dhammaado guul wakhti aan dheerayn , dabadeedna barnaamijkaasi laga sii wado Gobalada kale ee Puntland .
‘’ Dhul badan oo rooban ayaa sii marnay oo soo marnay , ilaah waxaan ka rajeynayaa inta kale ee abaarta ahna uu abaarta ka saaro , madal kheyr qabana ayaa rajeynaynaa ‘’ Ayuu hadalkiisa sii raaciyey Madaxweyne Gaas.
Puntland oo sii daysay rag loo haystay Al-shabaab-nimo